Komisheni yeKodzero Yoshambadza Mabasa Ayo
Chivabvu 04, 2016
Zimbabwe Human Rights Commission road show
Vamwe vagari vemuBulawayo vanoti boka reZimbabwe Human Rights Commission rinofanirwa kuzvishambadza zvakasimba rizivikanwe nevanhu kuitira kuti rigokwanisa kuita basa raro rekukurudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu nemazvo.
Vamwe vevagari vataura neStudio7 ava vange vari paSekusile Shopping Centre mumusha unogara veruzhinji weNkulumane apo pange pachiitwa roadshow neboka reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC.
Vagari ava vati vange vasina zvakawanda zvavange vachiziva pamusoro peZHRC.
Mumwe weavo vataurira Studio 7 kuti vange vasina ruzivo nezveZHRC ndiMuzvare Vimbai Murecha avo vati kushambadza kwaitwa komisheni iyi kwavabatsira chose.
Mumwe mugari uyo asina kuda kutaura pamhepo ati ane makombi uye ati anoshushikana nekubatwa kunoitwa vemakombi nemapurisa akatiwo veZHRC vanofanirwa kudzidzisa veruzhinji kodzero dzavo kuti vagoziva zvekuita kana kodzero idzi dzatyorwa.
Mumwezve mugari, VaShadreck Chinembiri, vati chirongwa chekuzvishambadza ichi chinogona kubatsira asi vati veZHRC havafanirwe kushandisa chirongwa chakadai kuti vangozvishambadza chete kuti vagowana rutsigiro rwemari kubva kumasangano akasiyana-siyana pasina zvavanozoita zvakati tsvikiti zvinobatsira vanhu.
VeZHRC vari kuita chirongwa chekuzvishambadza ichi icho chinonzi “Taking Human Rights to the People” vakabatana nemasangano anoshanda akzvimirira ega anosanganisira Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ne Zimbabwe Human Rights NGO Forum.
Mumwe komishina we ZHRC , Amai Sethule Moyo, vabvuma kuti chirongwa ichi chakaitwa mushure meongororo yakaratidza kuti veruzhinji hapana zvavanoziva pamusoro pekomishoni iyi.
Gweta musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, VaKenias Shonhai, vati vakaona zvakakosha kushanda pamwe chete neveZHRC nemamwe masangano sezvo vachiita basa rakafanana.
VaShonhai vati kubatsira kushambadza kwavari kuita sangano reZHRC kwave kutobatsira kuti kuti komishoni iyi iziikanwe sezvo vamwe vanhu vemuHarare vakatanga kuunza zvichemo zvavo kukomishoni yacho mushure mekushambadza kwakadai.
Kushambadza uku, uko kwakatanga muHarare kwauya muBulawayo kekutanga uye kuchaenderera mberi pakupera kwevhiki kuMaphisa muMatabeland South.
Nyaya Ina Taura Shava
America Yopa WFP Mari Yekuti Itengere Zimbabwe Chikafu
Komiti yeParamende Yoshanyira Bulawayo Zvichitevera Dambudziko reMvura
Amai WaVaNelson Chamisa Vanoshaya
Madzimai Okurudzirwa Kutsvaga Rubatatsiro neChimbi Chimbi Vakabatwa Chibharo Kuti Vasatapurirwe Zvirwere
Vatsigiri veNhabvu Vopesana Kuti Mutambo Uyu Wotanga Here muNyika muine Covid-19